काठमाण्डौ । दुई विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेको प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले अधिकांश वित्तीय सूचकमा आकर्षक सुधार गरेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो खुद नाफा अघिल्लो यो अवधिको तुलनासम्म ३१.१९ प्रतिशत बढी हो।...
कोरोना कोषमा प्राइम बैंकबाट रु. १ करोड ७५ लाख चेक हस्तान्तरण
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंकले कोरोना कोषमा रु. १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपाल सरकारद्धार स्थापित “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष” मा आज आज शुुक्रबार बैशाखरु. १,७५,००,०००/-(अक्षरुपी एक करोड पचहत्तर लाख) रुपैयाँको चेक...
कैलाशलाई प्राप्ति गरेको प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार आजबाट
काठमाण्डौ । कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्तिपछि प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको नाममा आज बिहीबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कैलाशलाई प्राप्ति गर्न प्राइमलाई अन्तिम स्वीकृति दिएसँगै एकीकृत कारोबार सुरु हुने भएको हो। बैंकको मुख्य कार्यालय भने काठमाण्डौको कमलपोखरीमा हुनेछ। प्राइमले कैलाश बैंकलाई...
काठमाण्डौ । कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्तिपछि प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको नाममा भोलि बिहीबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कैलाशलाई प्राप्ति गर्न प्राइमलाई अन्तिम स्वीकृति दिएसँगै एकीकृत कारोबार सुरु हुने भएको हो। बैंकको मुख्य कार्यालय भने काठमाण्डौको कमलपोखरीमा हुनेछ। प्राइमले कैलाश बैंकलाई...
कैलाशलाई प्राप्ति गरेको प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार फागुन २९ गतेबाट
काठमाण्डौ । कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्तिपछि प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको नाममा यही फागुन २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कैलाशलाई प्राप्ति गर्न प्राइमलाई अन्तिम स्वीकृति दिएसँगै एकीकृत कारोबार सुरु हुने भएको हो। बैंकको मुख्य कार्यालय भने काठमाण्डौको कमलपोखरीमा हुनेछ। प्राइमले कैलाश...
स्वभावैले विदेशी यात्रुको आवतजावत हुने अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने उडानले कोरोना भाइरसको सन्त्रासलाई थप बढावा दिने गर्दछ । के अन्तरराष्ट्रिय उडान रोक्दैमा कोरोनाको सम्भावित जोखिम नियन्त्रण हुन्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन किनकी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश मात्र हैन, विकसित मुलुक युरोप अमेरिकालगायतकाले पनि यस्तो प्रश्नको...
प्राइम बैंकले रु. ३.५ अर्बको ऋणपत्र निश्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरबीबी मर्चेन्ट नियुक्त
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमीटेडले रु. ३ अर्ब ५० करोड बराबरको ऋणपत्र निश्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बैंकले ऋणपत्र निश्कासनका लागि आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई निश्कासन तथा विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । बैंकले १०.५ प्रतिशत ब्याजदरको आठ बर्षको समयवधिमा फिर्ता भुक्तानी गर्ने गरी रू.१,००० अंकित दरका ३५ लाख...
प्राइम बैंकको दोस्रो त्रैमास विवरण सन्तोषजनक, नाफा २२.६१%ले बढ्यो, ईपीएस रु. २६.८७
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म २२.६१ प्रतिशतले खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
प्राइम र कैलाशको साधारणसभाद्वारा दुई संस्थाको मर्जर पारित, पूँजी बढेर १४ अर्ब पुग्ने
काठमाण्डौ । कैलाश विकास बैंकको साधारणसभाले प्राइम बैंकसँग १ः ०.९४ को सेयर स्वाप अनुपातमा बिलय हुने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न २६औं वार्षिक साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । योसँगै प्राइम बैंकको शुक्रबार नै सम्पनन १२ औं वार्षिका साधारणसभाले समेत कैलाशलाई सोही सेयर स्वाप अनुपातमा एक्वायर गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।...
आज तीन बैंकको वार्षिक साधारणसभा, कुन–कुन ? के–के छन् मुख्य अजेन्डाहरु ?
काठमाण्डौ । तीनवटा बैंकको आज पुस २५ गते राजधानीका विभिन्न स्थानमा वार्षिक साधारणसभा आयोजना हुँदैछ । नेपाल बैंक लिमिटेड आफ्नो ६० औँ, प्राइम कमर्सियल बैंकले १२ औँ र कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले २६ औँ वार्षिक साधारणसभा गर्न लागेका हुन् । यी बैंकहरुको साधारणसभा क्रमशः काठमाण्डौको हलचोकस्थित एपीएफ क्लब, राष्ट्रिय सभागृह र अमृतभोग पार्टी...
प्राइम बैंक, युनाइटेड र जानकी फाइनान्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक, युनाइटेड फाइनान्स र जानकी फाइनान्स लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज आइतबार अन्तिम मौका रहेको छ । तीनवटै वित्तीय संस्थाले भोलि सोमबार (पुस १४ गते) देखि साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दैछन्। साधारणसभामा भाग लिन लाभांश प्राप्तिका लागि योग्य हुन आज आइतबारसम्म सेयरधनी कायम हुनुपर्नेछ...
प्राइममा विलय हुने कैलाश विकास बैंकले डाक्यो साधारणसभा, यी हुन् मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंकमा विलय हुन लागेको कैलाश विकास बैंकले आफ्नो २६ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ । बैंकले यही पुस २५ गते शुक्रबार काठमाण्डौको कालिकास्थानस्थित अमृतभोग पार्टी प्यालेसमा वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामा गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी बैंकले प्रस्ताव...
प्राइमले कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया टुंगो लाग्दै, वार्षिक साधारणसभा एकैदिन
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक र कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले एकै दिन वार्षिक साधारणसभाको मिति तय गरेका छन् । दुवै बैंकको सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले यही पुस २५ गते वार्षिक साधारणसभा गर्न लागेका हुन् । प्राइमको १२ औँ वार्षिक साधारणभा काठमाण्डौको राष्ट्रिय सभागृह र कैलाशको २६ औँ वार्षिक साधारणभा �...